March 7, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 7th, 2017'
Amar Lagu soo rogay Askarta Dhexyaacaysa Magaalad Muqdisho (VIDEO)
March 07, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi (Farmaajo) ayaa maanta Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kula kulmay Saraakiisha Ciidamada Nabad sugidda, Millitariga iyo Booliska. Waxa uu kala hadlay xaalada ammaan ee dalka gaar ahaan Magaalada Muqdisho, oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen dilal qorsheysan, kuwaasi oo loo geysanayay Mas’uuliyiinta Dowladda iyo dad …
Ciidanka oo Muqdisho Laga Saarayo (VIDEO)
Waxa uu kala hadlay xaalada ammaan ee dalka gaar ahaan Magaalada Muqdisho, oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen dilal qorsheysan, kuwaasi oo loo geysanayay Mas’uuliyiinta Dowladda iyo dad shacab ah. Farmaajo ayaa saraakiisha ammaanka Dowladda Federaalka ku amray in Cadaaladda la hor keeno Askarigii shalay dilay Qofka shacabka ah, kaasi oo la sheegay in …
Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka oo Sheegay in Askarta Sida Xaqdarada ah ku Qaatay Garaadaha la Imtaxaamayo (VIDEO)
March 07, 2017 – Taliyaha Ciidana Xooga dalka oo maanta isugu yeeray dhamaan sarakiisha sare ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa u sheegay in wixii maanta ka bilaawda magaalada laga saaro ciidamada militeriga Soomaaliya. Waxaa taliyeyaashu isku raaceen sugidda ammaanka caasimadda in lagu wareejiyo ciidamada Booliska iyo kuwa Nabad Sugidda Qaranka. Taliyaha ciidanka xooga dalka …
Kulankii Taliyaha iyo Saraakiisha (VIDEO)
Waxaa taliyeyaashu isku raaceen sugidda ammaanka caasimadda in lagu wareejiyo ciidamada Booliska iyo kuwa Nabad Sugidda Qaranka. Taliyaha ayaa saraakiisha hogaamisa ciidanka u sheegay inay jiraan saraakiil aan waxba aqoon si xaqdaro ah lagu siiyay garaado aysan shaqaysan, taasina sheegay inuu wax ka qabanayo.
Soo Dhawayntii António Guterres (VIDEO)
Xoghaye António Guterres ayaa waxaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo, iyo mas’uuliyiin kale oo ka socday UN-ka iyo Amisom. Guterres oo xilkaan qabtay 1-dii January 2017 ayaa safarkiisa uu maanta ku soo gaaray Magaalada Muqdisho, wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee uu ku yimaado dalka, tan iyo markii xilkan …
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo Maanta si Diiran Loogu soo Dhaweeyay Magaalada Muqdisho (VIDEO)
March 07, 2017 – Magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa maanta soo gaaray Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, kaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan. Xoghaye António Guterres ayaa waxaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo, iyo mas’uuliyiin kale oo ka …
Madaxweynaha Dalka Maraykanka oo Markale Saxiixay Amar Lagu Takoorayo Shacabka 6 Dal oo Muslin ah (VIDEO)
March 07, 2017 – Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa markale saxiixay amar cusub oo dhanka socdaalka ah kaasi oo saameyn ku yeelanaya shacabka lix dal oo muslin ah. Amarkan cusub ayaa yimid kadib markii amarkii hore ee madaxweynaha maraykanka uu dalkaasi kaga mamnuucayey dadka kasoo jeeda toddobada dal, uu diiday xaakim federali ah oo ku sugan …
Amar Lagu Takoorayo Shacabka 6 Dal (VIDEO)
Amarkan cusub ayaa yimid kadib markii amarkii hore ee madaxweynaha maraykanka uu dalkaasi kaga mamnuucayey dadka kasoo jeeda toddobada dal, uu diiday xaakim federali ah oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Waxa uu kaga duwan yahay amarkaan cusub kii hore inuusan dhaqan galeyn durba, oo uu si buuxda u billaabanayo 16-ka bishan March, …
Sarkaal Sare oo Katisan Ururka Al Shabaab oo Isku soo Dhiibay Ciidanka Koonfur-galbeed (VIDEO)
March 07, 2017 – Maamul goboleedka Koonfur-galbeed ayaa sheegay in magaalada Baydhabo ay iska soo dhiibeen saraakiil ka tirsan ururka Al-shabaab, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Baay. Saraakiil u hadashay ciidamada Koonfur-galbeed ayaa sheegay in Afar qof oo Al-shabaab katirsan ay dhankooda isku soo dhiibeen, waxayna mid kamid ah ay ku sheegeen inuu yahay …
Sarkaalkii Qaraxyada ee Baydhabo (VIDEO)
Saraakiil u hadashay ciidamada Koonfur-galbeed ayaa sheegay in Afar qof oo Al-shabaab katirsan ay dhankooda isku soo dhiibeen, waxayna mid kamid ah ay ku sheegeen inuu yahay sarkaal sare oo kooxdaasi u qaabilsanaa dhanka samaynta miinooyinka. Dhanka kale ururka Al-shabaab ayaan weli ka hadlin, wax ka jira in saraakiil iyaga ka tirsan ay magaalada Baydhabo …